Samsung DA-E750 n'ọdụ ụgbọ mmiri, Ọkà okwu na agụụ tube ampilifaya | Akụkọ akụrụngwa
Nacho Cuesta | | Ndị na-ekwu okwu
N'ụwa nke ụda anyị nwere nhọrọ iji mejuo ụtọ ndị ọrụ niile. Ngwaahịa anyị wetara gị, Samsung DA-E750 Audio n'ọdụ ụgbọ mmiri, bụ ntakịrị ihe na-enweghị isi na ịkụ nzọ na inye onyinye dị oke egwu na njikọta zuru oke iji nwee ike ijikọ isi iyi ọ bụla.
N'agbanyeghị ọdịdị ya, nke kachasị mma n'ọdụ ụgbọ mmiri a dị na ya qualityda àgwà na ya agụụ tube dabeere ampilifaya nke Samsung choro iji nweta ihe okike.
1 Mmetụta mbụ
2 Na-ege ntị music na DA-E750 Audio n'ọdụ ụgbọ mmiri
3 Ampilifaya na agụụ akpa
Ozugbo anyị wepụrụ Samsung DA-E750 Audio Dock na igbe ya, anyị nwere ike ịhụ na ọ dị ọtụtụ (8,6 Kg) n'ihe metụtara akụkụ ya (450x148x240 mm), ihe nkịtị mgbe anyị hụrụ na anyị nwere abuo okwu abuo na subwoofer na ya ala akụkụ na ọnụ, tinye ike nke RMS nke 100W.
Ọdịdị ya dị oke mma ma m ga-ekwupụta nke ahụ Ahụtụbeghị m ngwaahịa Samsung nwere ezigbo mma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahụ dum nke ọkà okwu gwụchara n'osisi na-egbuke egbuke maka ọdịdị dị oke mma.
N'elu ụgbọ mmiri anyị na-ahụ ogwe njikwa nwere bọtịnụ anọ iji jikwaa isi ọrụ nke ngwaahịa ahụ. Anyị na-ahụkwa windo enyo nke na-apụta ntakịrị na nke anyị nwere ike ịhụ tubes abụọ agụụ na-eji iji mee ka akara ụda ahụ dịkwuo elu.
Na azụ anyị nwere nkịtị patch panel N'ime nke anyị na-ahụ njikọta maka ọkọnọ ike, ọdụ ụgbọ USB, ntinye onyonyo dabere na jaket 3,5 mm, ọdụ Ethernet, bọtịnụ Tọgharia na ọdụ ụgbọ mmiri maka SAT. Ọ bụrụ na anyị gaba n'ihu, anyị ga-ahụ usoro inupụ / banye nke na-ahapụ achọpụta ebe obibi nwere njikọ ntụtụ 30 maka ngwa Apple na microUSB maka Smartphone ma ọ bụ mbadamba ndị ọzọ. Ekwesiri ighota na ngwaahịa a dakọtara na Airplay, AllShare ma nwee Bluetooth 3.0.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị tụgharịa Samsung DA-E750 Audio Dock, anyị ga-ahụ na enwere mmesapụ aka sized subwoofer nke ga-eleba anya na ikpuchi mmeputakwa nke ikuku kacha ala.
N'ihe banyere aesthetics na njikọ, anyị enweghị ihe ị ga-ajụ. Ugbu a ọ bụ oge iji hụ ma ọ bụrụ na ngalaba ọdịyo dị ruo par.
Na-ege ntị music na DA-E750 Audio n'ọdụ ụgbọ mmiri
Dịka anyị kwurula, anyị nwere ike ijikọ isi iyi ọ bụla na ngwaahịa a ebe ọ bụ na anyị nwere njikọ maka ụtọ niile. Na anyị ikpe, anyị kpebiri iji nwalee Apple si airplay protocol na-enwe uru ọ nwere na-ege ntị music-ejighi eriri site na Wi-Fi.
Mgbe emechara obere nhazi usoro nke mere na n'ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike jikọọ anyị na netwọk, ihe niile dị njikere pịa Play bọtịnụ na-enwe. Iji mee nnwale mbụ m họọrọ otu abụ olu ụtọ dị egwu, nwere ọtụtụ ngwa na olu na-eme ka ntutu kwụrụ ọtọ site na mbido.
Achọrọ m pịa bọtịnụ Play, egwu na-amalite igwu egwu ma anyị nwere ike ịghọta nke ahụ ụda dị mma dị na ngwa ndị ọzọ. Ọ dị mma inwe ike ige egwu dịka e si kee ya, na-enweghị ngwa ọrụ na-egbochi ibe ya na enweghị mgba n'etiti etiti.
Anyị nwere ike ịghọta nuances niile nke egwu n’otu ụzọ ahụ dị ka a ga-asị na anyị na-eji ezigbo ekweisi na-ege ya ntị na nke ahụ na-egosi mbọ Samsung gbara n’ime imepụta ezigbo ngwaahịa.
Anyị na-anụ egwu yiri ya na ha niile na-ada ezigbo ụda, na-enye mmetụta na otu ahụ na-egwu n'ihu anyị.
N'iburu na ọ na-ejikwa ụdị ndị a nke ọma, ka anyị hụ ma anyị na onye na-ekwu okwu na-ekwu okwu ma ọ bụ na ọ ga-adaba na ụdị ụfọdụ karịa ndị ọzọ. Ugbu a, anyị na-ahọrọ ihe na-enye a ọnụnọ nke bass dị ike karị ma ọ bụ ebe anyị na-achọpụta ụfọdụ enweghị.
Samsung achọghị ka subwoofer kpuchie na ụda dị elu n'ihi na otu a, anyị ga-atụfu nkọwa nke abụ ndị anyị na-agaghị anụ ma ọ bụrụ na anyị nwere subwoofer dị oke ike. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị na-ekwu maka 60W RMS nke ike maka bass ebe a na-ekesa 40W RMS fọdụrụ maka etiti na tweeters.
Na njedebe anyị nwere ụda guzoziri eguzozi nke ọ na-anaghị adịkarị otu ọzọ. Ige egwu na Samsung DA-E750 Audio Dock dị na ọkwa ọzọ na nke a na-enweghị mgbagha.
Ampilifaya na agụụ akpa
N'ụwa ebe mgbasawanye nke transistors emeela ka ọ nwee ike ibudata ihe elektrọnik kachasị, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ịchọta amp nke na-eji tubes agụụ.
Agụụ valvụ bulie eletriki mgbaàmà site na ije nke electrons na efu ohere. Ekele ya imewe, a electronic akụrụngwa na-eme ka ụda ikwesi ntụkwasị obi dị elu.
N'ihe banyere Samsung DA-E750 Audio Dock, enwere valves agụụ abụọ nke a na-ahụ site na windo iko. Mgbe ampilifaya bụ na, agụụ agụụ na-on a oroma hue na mara mma nke ukwuu na njikọ na aesthetics nke okwu.
Anyị na-eche ihu a n'ọdụ ụgbọ mmiri na otutu njikọ maka ndị niile na-achọ ịnụ ụtọ egwu n'ebube ya niile.
Ọ ga-amasị anyị ịhụ ụgbọ mmiri ahụ na njikọ njikọ Lightning maka ngwaọrụ Apple kachasị ọhụrụ mana anyị chere na Samsung ga-ahapụ nyocha ngwaahịa na nkọwa a edozila.
Site na ego akwadoro nke euro 599 (ọ bụ ezie na n'ụlọ ahịa ụfọdụ ọ dịlarị maka euro 450), Audio Dock Samsung DA-E750 bụ ngwaahịa nke akwadoro maka nha ya, ogo ya na njikota ya.
Ozi ndị ọzọ - Sonos na-atụ aro Cinema Home wireless jikọtara ọtụtụ ngwaahịa ya
Njikọ - Samsung
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Ndị na-ekwu okwu » Audio n'ọdụ ụgbọ mmiri Samsung DA-E750, ọkà okwu na agụụ tube ampilifaya
O nwere batrị ???
Mba, enwere ike tinye ya n’ime ya.
Enwere ike ijikọ akụrụngwa a na turntable?… Daalụ.
Zaghachi GERMAN OLAYA